Shaakiil Afriidii: Osaamaa Bilaadan argachuuf hakiima CIA gargaare - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Dr Shaakii Alfiidii himannaa hunda haaluun gonkumaa murte sirrii hinargannee jedheera
Lammiin Paakistaan akka gareen basaasaa Ameerikaa - CIA'n hogganaa Alqaayidaa Osaamaa Bilaadiin argatuuf deeggaree jira jedhamefi amma hidhaarratti argamu dhimma isaa ol iyyate.
Dhimmi mana murtii Dr. Shaakiil wayita ifatti ilaalamu kun kan jalaqabaati. Haa ta'u malee abbaan alangaa ammas akka yeroon dabalataa kennamuuf waan gaafataniif ammas beelamni guyyaa 12 hayyamameefiira.
Gaheen Dr Shaakiil bahan kunis Paaksitaanota birratti komii olaanaa uumeera. Hakiimni kun garuu himannaa irratti dhiyaate hinraawwannee jechuun haalaniiru.
Hamzaa Bin Laadin 'haleellaa xiyyaaraan 'ajjeefame
Nama adduunyaarratti barbaadamaa ture Osaamaa Bilaandaniin baraaruufi ajjeessuuf xabateera jedhameen hanga bara 2011tti himannaan ifatti irratti baname hinturree.
Isaan booda hidhamu Dr Shaakiitti aarte kan turte Ameeriikaan deeggarsa maallaqaa waggaatti Paakistaaniif taasiftu doolaara miliyoona 33 gara miliyoona tokkootti hirrifte jirti.
Dr Shaakiil Ameerikaanotaan akka gootaatti leellifamanillee lammilee Paakistaa birratti ammoo akka nama biyya ganeefi salphiseetti ilaalamu.
Pirezidaantiin Ameerikaa Donaald Tiraamp tibba duula filannoo bara 2016'tti, yoo filataman Dr Shaakiil 'daqiiqaa lama' keessattan hiidhaadhaa hiiksiisa jechuun waadaa galanii turan. Haa ta'u malee waadaan yoos galan hin dhugoomne.
Humni galaanaa Ameerikaa gara naannichaatti bobba'uun hogganaa shororkessummaa Fulbaana 11 kan ta'e Osaamaa Biilaadan ajjeesaniiru.
Adeemsi kunis gaaffiiwwan hedduu kaasun isaa hinollee. Humni waraanaa Paakistaan kan nageenya biyyatti eegsiisu eessa ture? Ofii Biilaadan biyya keessa jiraachuyyuu ni beeku turanii? fi kkf dhimmoota hedduun gaafataa turniidha.
Dr Shaakiil Afriidii eenyudha?
Dr. Shaakiil Paakistaan keessa bulchiinsa Haayibariitti oggeessa fayyaa beekamaadha. Bulchiinsuma sana keessatti itti gaafatamaa tajaajilawwan fayyaa ta'uun sagantaalee talaallii Ameerikaan deeggarame hoggananiiru.
Akka to'ataa motummaattis bakka Biilaadan funyaan motummaa jala jiraataa ture jedhame Abootaabaad, magaalaa Gaarson dabalatee sagantaalee talaalli 'hepatitis B' gageessaniiru.
Karoorri basaastoota Ameerikaa jalqabaa kan ture daa'imman naannoo Abotaabaad jiraan irraa saamuda dhiigaa fudhachuuf ture. Isaan boodas Osaamaa Bilaadan waliin dhiigni walitti dhufu yoo jiraate mirkanneefachuf ture.
Haaluma sanaanis hojjataan Dr. Shaakiil gara dallaa sanaatti imaluun saamuda dhiigaa akka funaane himama. Haa ta'u malees, saamudi dhiigaa kun Ameerikaan galma ishee akka geessuuf haa gargaaruu ykn haa dhiisuu wanti beekamu hinjiru.
Dr Shaakil Caamsaa bara 2011erga Osaamaa Biilaadan ajjeefaman guyyoota 20 booda to'annoo jala olfaman. Dr kun wayita sanatti umurii waggaa dhuma 40 irratti argamu ture.
Dr Shaakiil maatii naamusa qabu keessatti kan guddatan ta'u dhugaa kan bahamuuf yoo ta'u, bara 1990tti kolleejjii wallaansaatii akkuma eebbifamaniin waan hidhamaniif, maatiinsaanii hidhattoottaan miidhaan nurra gaha jedhanii sodaachuun dhokatanii akka jiraatan himamuun alatti waa'ee dhunfaasaanii irratti kan beekamu hinjiru.
Haatii warraasaanii oggeettii barnootaa yoo ta'an, osoo ofi hindhoksiin dura mana barnootaa mootummaa tokko keessatti daarektara ta'un hojjataniiru. Akkasumas ijoollee dhiiraa lamaafi dubara takko godhataniiru.
Qondaalonni Ameerikaas Amajjii 2011tti Dr Shaakiil dhaabbata basaasaa Ameerikaa CIA waliin hojjataa akka turan amananii ture.
Haa ta'u malee doktarichi kun gahe dhaabbaticha keessatti qabaataa turan hangam akka ta'e ifa miti. Haala ajjeechaa Biilaadaniin walqabateenis qorannoo Komishiiniin Obootaabaad taasiseen gumaati taasisaniiru jedhame hangam akka ta'e kan jedhame hinjiru.
Bu'aan qorannoo biyyattii akka hubachiiseetti Dr Shaakiil kaayyoon gochiichaa eenyu akka tureefi CIA'n attamiin akka filataman hinbeekan.
Maaliif balleessaa qabda jedhame?
Dokarri kunis jalqaba bara 2012tti biyya haaluun kan himatame ture yoo ta'u, amma garuu maallaqa dhaabbata hidhataa biyya keessatti hinsochoon 'Laashekaar Isilaam' jedhamuu erguun balleessaa raawwatte jirta jedhamuun hidhameera.
Walitti dhufeenya garee kana waliin qabda jedhameenis hidhaan waggaa 33 kan itti murtaa'e yoo ta'u, booda keessa ol iyyannoo dhiyeessaniin gara waggaa 23 hirrateefiira.
Himmannichi kan irratti banameef walitti dhufeenya garee jedhame sana waliin qabu qofaan osoo hintaane, garichaaf deeggarsa wallaansaa taasisuufi hospitaala bulchaa turan keessatti garichi walgahii akka taasifatuuf hayyamuunis jedhamera.
Maatiin isaanii garuu murtee irratti dabarfame cimsuun balaalleefatan. Abbukaatoon isaas doktarri kun maallaqni garee kanaaf kennan osoo jiraatee, tarii bara 2008tti wayita butame tureetti akka gadhiifamuus doolaara 6,375 raawwachu hima.
Bara 2912tti erga hidhamanii booda dhaabbata nageenyaa Paakistaaniin dararamniifi miidhaa akka irratti raawwatame doktarri kun Oduu 'Fox'tti himaniiru.
Waggaa tokkoon boodas 'haqa dhorkameera' jechuun barreeffama harkaan barreessaniin oggeessoota seeraatti ergaa dabarfachuu danda'aniiru.
Ameerikaa deegaruun maaliif hinhimatamiirree?
Sababiinsaa ifa ta'u baatulleen, dhimmi Biilaadan Paakistaaniif kisaaraa olaanaa ture.
Anga'oonni biyyatti dhimmicha sarbamuu walabummaa biyyaa taasisanii ilaalan illeen, dhaabbanni nageenyaa hundeessaan hoogganaan Alqaa'idaa Biilaadan duuba gamoo guddaa mana abbaa darbii sadii keessa waggoota baayyeef icciitiin jiraataa akka ture akka hinbeekne adabaabaayiitti ibsaniiru.
Goodayyaa suuraa Qe'ee Biilaadan keessa jiraata jedhame osoo bara 2012tti hindiigamiin dura
Waayit Hawuusiitti Itti gaafatamaan To'annoo Shororkessuummaa Joon Bireenaan ''wayita ammaatti Biilaadan Paakistaan keessatti deegarsa hinqabu jechuun amansiisaa miti,'' jedhan illeen Islaamaabaad himmannicha hin fudhu jettee ture.
Kanuumaaf fakkaata Paakistaanis Dr Shaakiil duula Ameerikaan taasiftee keessatti gahee bahusaatiin yoo himatan, maqaa biyyattii balleessuu danda'a jechuun ifatti himannaan dhiyaate hinjiru.
Dr Shaakiil beelama mana murtii itti aanutti himannaan saanii akka adda cituu ykn yeroo hidhaa itti dabaluu mala abbaan seeraa beeksiise.
Gama biraatiinis bara darbe keessa mana hidhaa Peeshaawaarii gara Punjaabiitti kan dabarfaman Dr Shaakiil, haala Alqaa'iin wal qabateen Ameerikaatti hiidhaarratti kan argamtu hakimii narviifi haadha ijoollee sadii kan taate lammii Paakistaan Afiyaa Siidiqii waliin jijjirraa hidhamtootaa taasisuun hiiksiisu akka danda'an himamaa jiras. tu.
Doonaald Tiraampi marii nagaa Afgaanistaan waliinii haqan
8 Fuulbana 2019
Chaayinaa qoqqooduuf namni yaalu 'lafeetu daaraa ta'a'
Atileetiin Keeniyaa Brigid Kosgei rikoordii maaraatoonii dubartootaa cabsite